Soo-saareyaasha Vacuum (VI) Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadaha Shiinaha Vacuum Interrupter (VI)
Tiir Dhex-Dhex Yaal Ah Oo Lagu Arkay Wareegtada Wareegga Gudaha EP-12 / 630-25 EP-12 / 1250-25 EP-12 / 1250-31.5
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqooyinka isdabajoogga ah ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003 2. Astaamaha lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleeliska la qiimeeyay wuxuu ubaahanyahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee elektroolka iwm. Qeexida Farsamada Muhiimka ah Qiyaasta Xaddiga KV 12 Qiimeeyay Xilligaan A 630/1250 Heer Ahaanta Heerka Hz 50 Waqti-gaaban Awood-Joogtada Adkeysiga (1min) KV 48 Danab qiime leh Withstan ...
Kala-baxa Vacuum-ka ee kala-goynta goynta 'TF-12 / 630-20 (2F56)
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiyaasta qiimayaasha dahaarka waxay u baahan tahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee korontada iwm. Qeexida Farsamada Muhiimka ah Heerka Qiyaasta KV 12 Qiimeysan Iminka A 630 Lagu qiimeeyay Frequency Hz 50 Xilliga Gaaban ee Awood-soo noqnoqodka Joogtada ah (1min) KV 42 hillaac qiimeysan Dhiirigelinta Diidmada Vo ...
Vacuum Interrurator Wixii Load Break Beddelashada TF-12 / 630-20 (2F55)
Faaruqiyaha Faakiyuumka ee Wareegtada Wareega Dibadda TD-40.5 / 1250-31.5 (4D86)
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleelinta la qiimeeyay wuxuu ubaahanyahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee korontada iwm. Qeexida Farsamada Muhiimka ah Qiyaasta Heerka KV 40.5 Qiimeeyay Xilliga A 1250 Qiimeyn Frequency Hz 50 Xilliga Gaaban ee Awood-Joogtada Taagan (1min) KV 95 hillaac qiimeeyay Diidmada Rabitaanka ...
Faaruqiyaha Faakiyuumka ee Wareegayaasha Wareega Dibadda TD-40.5 / 1250-31.5 TD-40.5 / 1600-31.5
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleelinta la qiimeeyay wuxuu ubaahanyahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee elektroolka iwm. Qeexida Farsamaynta Muhiimka ah Heerkulka KV 40.5 Qiimeeyay Hada 1250/1600 Heer Ahaw Heer Hz 50 Waqti-gaaban Awood-Joogtada Adkeysiga (1min) KV 95 Hillaac qiimeyn leh
Faaruqiyaha Faakiyuumka ee Wareejiyayaasha Wareegga Dibadda TD-24 / 630-20 (3D82)
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleelinta lagu qiimeeyay wuxuu ubaahanyahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee dabka iwm Waxyaabaha Farsamaynta Muhiimka ah Qiyaasta Xaddiga KV 24 Qiimeeyay Xilligaan A 630 Lagu qiimeeyay Frequency Hz 50 Waqti-Gaaban Awood-Soo-noqnoqda Iskuduwaha (1min) KV 65/79 Danab qiime leh Withstan ...
Faaruqiyaha Faakiyuumka ee Wareegtada Wareega Dibadda TD-12 / 1250-25 (2D89B)
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleelinta la qiimeeyay wuxuu ubaahan yahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee elektroolka iwm. Diidmada Rabitaanka ...
Faaruqiyaha Faakuumka ee Wareegtada Wareega Dibadda TD-12 / 630-25 (2D89)
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleelinta qiimahoodu wuxuu ubaahanyahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee korontada iwm. Qeexida Farsamada Muhiimka ah Qiyaasta Xaddiga KV 12 Qiimeeyay Xilligaan A 630 Qiimeyn Frequency Hz 50 Xilliga Gaaban ee Awood-Joogtada Taagan (1min) KV 48 Hillaac qiimeyn leh Dhiirigelinta U-adkaysiga V ...
Faaruqiyaha Faakuumka ee Wareegtada Wareega Dibadda TD-12 / 630-25 (2D88)
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleeliska la qiimeeyay wuxuu ubaahanyahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliida ama walxaha adag ee koronto iwm. Qeexida Farsamada Muhiimka ah Heerka Qiyaasta KV 12 Qiimeysan Hada A 630 Lagu qiimeeyay Frequency Hz 50 Cadaadis waqti-gaaban Awood-dhowr (1min) KV 48 hilaac qiimeeyay Dhiirigelinta Istaagista Vo ...
Faaruqiyaha Faakiyuumka ee Wareegtada Wareega Wareega TD-12 / 1250-25 (2D85E)
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiyaasta qiimayaasha dahaarka waxay ubaahantahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee elektroolka iwm. Hillaac qiimeyn leh oo Is-hortaag ah ...
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleeliska la qiimeeyay wuxuu ubaahanyahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee elektroolka iwm. Qeexida Farsamada Muhiimka ah Heerka Qiyaasta KV 12 Qiimeysan Hada A 1250 Heer Ahaan Heer Hz 50 Cadaadis Waqti Gaaban ah (1min) KV 48 Hillaac qiimeyn leh Dhiirigelinta U-adkaysiga V ...
Faaruqiyaha Faakiyuumka ee Wareejiyayaasha Wareegga Dibadda TD-12 / 630-25 (2D85)
Ogeysiisyada 1. Buuxinaya ama dhaafey shuruudaha adkeysiga korantada ee heerka E2 ee shaqada isdaba-marinta ee IEC62271-100 iyo GB1984-2003. 2. Sifooyinka lagu qiimeeyay marka la codsado. 3. Qiimaha kuleelinta lagu qiimeeyay wuxuu ubaahanyahay insulati dheeri ah, sida Sf6, saliid ama walxaha adag ee korontada iwm. Qeexida Farsamada Muhiimka ah Heerka Qiyaasta KV 12 Lagu qiimeeyay Hada A 630 Lagu qiimeeyay Frequency Hz 50 Waqti-gaaban Awood-soo noqnoqosho Adkeysi (1min) KV 42/48 Hillaac qiimeyn leh oo Is-hortaag ah ...